Nisandoka ny anaran’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny: maorisianina iray sy Malagasy roa nidoboka eny Antanimora | NewsMada
Par Taratra sur 17/02/2020
Tsy mety fay! Naiditra vonjimaika am-ponja eny Antanimora ny teratany maorisianina iray sy ireo Malagasy roa niray tsikombakomba taminy noho ny fisandohana ny anaran’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Milaza fa mandefa mpiasa hiasa any Maorisy izy ireo…
Io indray koa! Olona telo ka teratany maorisianina ny iray, saron’ny polisy miasa ao amin’ny “enquête spécialisée”, ny zoma lasa teo teny Gare Soarano sy tohatohabaton’Ambondrona, voarohirohy amina raharaha fisolokiana avo lenta. Raha ny fanazavan’ny polisy, ny 11 febroary lasa teo, tonga nametraka fitoriana eny amin’ny polisy ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny fa misy olona manao taratasy hosoka sy fisandohana andraikitra mitondra ny anaran’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ary milaza fa afaka mandefa olona miasa any Maorisy. Nanamafy ny eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, araka ny fitoriana napetrak’izy ireo, fa mampiasa fitombokase hosoka amin’ny Raharaham-bahiny mihitsy ireto mpisoloky ireto. Nanao avy hatrany fanadihadiana ny polisy ka fantatra fa teratany maorisianina ny nanao io taratasy hosoka sy fisandohana andraikitra io ary miara-miasa amina teratany malagasy izy manampy azy manao ireo fitombokase hosoka ireo.
Anjatony ireo olona efa voasolokin’izy ireo…
Nanao ny vela-pandrika rehetra ahafahana misambotra ireto mpisoloky ireto ny polisy ka tratra teny Gare Soarano ilay Maorisianina raha tratra teny amin’ny tohatohabaton’Ambondrona kosa ireo Malagasy mpanampy azy amin’izao fisolokiana izao. Nandritra ny fanadihadiana azy ireo no nahafantarana fa misandoka ho mpandefa olona hiasa any Maorisy ity teratany maorisianina ity ka mitaky vola 1 hetsy Ar izy amin’ireo olona te hiasa any Maorisy. Nanamafy izy, nandritra ny famotoran’ny polisy, fa efa anjatony ireo olona voasolokiny ka ireo olona avy any amin’ny faritra avokoa ny ankamaroany. Tonga miakatra eto an-dRenivohitra avokoa izy ireo mialoha ny fotoana hiondranana mankany Maorisy. Tsy misy akory anefa ilay asa fa fisolokiana fotsiny ny ambadik’izao raharaha izao. Nohamafisin’ny polisy hatrany fa mpisoloky gagilahy ity Maorisianina ity. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotorana nataon’ny polisy.